China FFP3 5 sosona fanamboarana sy fanamboarana Respirator | Shuer
Fahombiazan'ny fanivanana mivaingana (PFE) ≥ 99% （Aerosol manitra）
Mahafinaritra amin'ny Clip Nose
Kaody vokatra: EN149
Loko: fotsy / namboarina
Fonosana: 1box / 5pcs
Mist-proof, vovoka -proof, orinasa, mandeha, bus, seranan-tsambo, zaridaina, toeram-pivarotana, stree be atao. orinasa any Japon, lakozia
Ity sarontava-kaopy ity dia tsy misy poizina, tsy misy fofona, tsy mahazaka ary tsy mahasosotra. Izy io dia vita amin'ny polypropylene ho akora fototra miaraka amina endrika olombelona, ​​mampiasa fitaovana avo lenta avo lenta izahay hamokarana sy fifehezana kalitao henjana. Sivana avo lenta, fisorohana ny poizina ambany. Ny endrika tsy manam-paharoa endrika ny kaopy mahatonga ny saron-tava sy ny tarehy, misoroka tanteraka vovoka sy ny viriosy tsy mahazo miditra amin'ny tarehy. Ny famolavolana orona ergonomika sy ilay pad orona mamy vita anaty malefaka dia mampahazo aina kokoa ny mitafy azy.
Ny fofonaina rivotra tsofintsika rehetra dia mety misy vovoka, PM2.5 ary akora manimba hafa sarotra, saingy tsy mila fantatrao izy ireo, mila manolotra ny sarontava fotsiny izahay. Mifanaraka fiarovana telo-refy, elastika avo ary fehy sofina mihitatra, rakotra orona plastika miafina, teboka fantsom-pandrefesana ultrasonika, mafy orina sy tsy milatsaka, sisin-tongotra efatra, tsy mora vava vava. , rakotra orona plastika miafina, teboka fanamafisam-peo ultrasonika, fanodinana mafy sy fanoherana ny làlan'ny efatra, tsy mora vahana, vava ny sofina malefaka sy malefaka, elastika avo lenta, tsindry ambany, finiavana mafy, akanjo maharitra Isaky ny rivotra miaina. mety misy vovoka, PM2.5 ary akora manimba hafa sarotra, saingy tsy mila fantatrao izy ireo, mila manolotra ny saron-tava fotsiny izahay.
1, sosona ivelany tsy misy tenona
2 sosona lamba tsy tenona vita amin'ny hoditra
3 Rendrika fefy notsofina
4 Ny fitrohana elektrostatika dia mitsonika sosona notsofina
Sosona anatiny tsy misy tenona
F1 ： Ahoana ny amin'ny fotoana andefasana anao?
Raha ny mahazatra dia maharitra 3 ka hatramin'ny 7 andro aorian'ny nahazoana ny petra-bola Ny fotoana fandefasana manokana dia miankina amin'ny entana sy ny habetsaky ny kaomandinao.
F2: Mizaha toetra ny entanao rehetra alohan'ny fanaterana ve ianao?
Eny, manana fitsapana 100% izahay alohan'ny fanaterana.
F3: Ahoana no anaovanao ny orinasanay maharitra sy fifandraisana tsara?
Tombony ； ary manaja ny mpanjifa rehetra izahay tahaka ny sakaizanay ary manao izany amin-kitsimpo izahay.
F4: Azonao atao ve ny manome santionany amin'ny fanandramana?
Misy santionany maimaim-poana, fa kosa ny sandan'ny entana dia ao amin'ny kaontinao ary hiverina aminao ny vola na hesorina amin'ny baikonao amin'ny ho avy.
F5: Afaka matoky anao ve izahay?
Eny, mpanamboatra ankatoavin'ny governemanta (Lisitra fotsy) izahay
Teo aloha: FFP2 5 layer Respirator
Manaraka: Saron-tava tsy misy valizy amin'ny kaopy
Saron-tava 3m Ffp3
Saron-tava vovoka Ce Ffp3
Ce Ffp3 Respirator Particate
Respirator Ffp3 azo alefa
Sarontava vovoka Ffp3
Sarontava azo ampiasaina Ffp3
Sarontava endrika feno Ffp3
Ffp3 Nr Mpanohitra an-tsokosoko
Sarontava Respirator Ffp3
Ffp3 Respirator miaraka amin'ny valizy miaina
Ffp3 Respirator miaraka amin'ny valizy miaina ho an'ny mpaninjara ambongadiny
Saron'ny vovoka fiarovana Ffp3
Sarontava Ffp3 Welding
Vokatra mafana - Sitemap - AMP Mobile Saron-tava Ffp3, Saron-tava fandidiana ambaratonga 3, Saron-tava tsy miendrika 3 Ply, Saron-tava fandidiana 3ply, Saron-tava azo ampiasaina 3ply, Saron-tava 3 azo ampiasaina miaraka amin'ny Fda,